Apple waxay ku shaqeyneysaa wax ku ool ah oo iswaafajinaya qalabka GaN | Waxaan ka socdaa mac
Waxyaabaha Apple ay ku xirxirayaan iPhone-ka waligiisba waxay ahaayeen kaftan, iyagoo bixiya xeedho 5W sanado badan markii moodooyinka iPhone-ka ee suuqa ku jira ay la jaan qaadayaan xawaaraha degdegga ah. Nasiib wanaagse, ka hor intaan la waayin xeedho on iPhone ah, Apple waxay bedeshay siyaasadeeda, oo ay ku jiraan xeedho awood sare leh.
Haddii aan ka hadalno xeedho, labada iPhone iyo Mac, waa inaan ka hadalnaa xeedho Gallium Nitride ah, oo si fiican loogu yaqaanno GaN (Gallium Nitride), xeedho mustaqbalka sida ay u bixiyaan faa'iidooyin taxane ah oo ka badan kuwa wax lagu rakibo ee caadiga ah. Sida ay sheegtay warbaahinta DigiTimesApple waxay ka shaqeyneysaa sidii ay u abuuri lahayd khad cusub oo ah qalabka wax lagu rakibo ee loo yaqaan 'GaN chargers' oo loogu talagalay Macs.
Sida laga soo xigtay warbaahintan, Navitas Semiconductor ayaa noqon doonta shirkadda mas'uulka ka noqon doonta soo saarista xeedhooyinkan, xeedho qafiif ah oo badan. TSM waxay soo saari doontaa jajabka maaraynta Navitas. Haddii ugu dambayn warkan la xaqiijiyo, Apple's MacBook wuxuu ku jiri doonaa xeedho yaryar oo waxtar badan oo aad ugu eg kuwa aan horay uga heli karno suuqa kuwa soo saara sida Anker.
Navitas waxaa loo yaqaanaa xariiqda gaNFast chargers, xariiq xeedho oo u dhexeysa 24W ilaa 300W. Sida laga soo xigtay isla isla, Apple noocyadiisa kala duwan ee qalabka wax lagu rakibo ee GaN Waxay ka koobnaan doontaa moodooyinka 20W, 30W, 61W iyo 96W dhammaantood oo leh xiriir USB-C si cad.
Faa'iidooyinka gallium nitride
Qalabka wax lagu duubo ee 'Gallium nitride' waxay na siisaa taxaddarro faa'iidooyin badan oo ku saabsan xeedhooyinka silikoon dhaqameedka tan iyo markii waxay dhaliyaan kuleyl aad uga yar oo qaybaha ayaa la isu soo ururin karaa iyaga oo isu dhow (iyada oo la abuurayo kuleyl yar) taas oo iyana saamayn ku yeelanaysa cabbirka ugu dambeeya ee xeedho.
Intaa waxaa dheer, waxay ku daraan nidaam xakameyn tamar ah taas waxay yareysaa fursadaha xad dhaafka ah ee hadda jira markii batteriga si buuxda loo soo buuxiyay, markaa nolosha batteriga ee laptop-yada ayaa waqti dheer sii jiri doona. Sida aan aragno, dhammaantood waa faa'iidooyin, ugu yaraan hadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple waxay ku shaqeyneysaa wax ku ool ah oo iswaafajiya GaN-gayaasha